Pfungwa huru ye emaimeri ako anotengeswa inoshandurwa.Kutengeswa kwepamuchinjikwa uye kutengeswa kwepamusoro ndiyo nzira dzekutengesa dzinovandudza mitengo yekushandura nekuchengetedza. Iyo yakakwirira iyo maharayekutendeuka ndeye, iyo huru ROI yaunowana - гетьте думи ви хмари осінні вірш. Aya mazano anogona kukuunza iwe kukosha kupfuura kupa zvipo zvinowedzera.
Oliver King, Mutengi weKuteresi Achibudirira Semalt Dhidhii Dhiyabhorosi inogovera mazano, ayo achakubatsira kugadzirisa zvakanaka maitiro email.
Chii icho Heck iri kutengesa-kutengesa uye kutengesa-kutengesa?
Apo kambani inopa zvinhu zvakafanana kana zvakasiyana kune vatengi vavo,iyo inotumidzwa kune kutengesa-kutengesa. Semuenzaniso, apo iwe unotenga kombiyuta uye unogamuchira zvirongwa zvakafanana zvakadai semushonga, flashdisks nezvimwewo zvigadzirwa zvinogona kufamba pamwe chete nechigadzirwa chako. Iyo inongobatanidza kudzidzisa vatengi nezvezvinhu zvakabatana. Ichiinogona kugadziriswa zvakanaka nekodzero yevadzidzisi maitiro.
Kune rumwe rutivi, kukwidziridzwa mamiriro ezvinhu apo mutengi anowanakupa kupa imwe kutenga. Mhedziso ndeyokuita kuti vatengi vashandise mari yakawanda kupfuura yavakanga varonga. Mukutenga kombiyutamamiriro acho ezvinhu, muteresi achapiwa kombiyuta ine zvinhu zviri nani kudarika iyo yakasarudzwa yakange ine mutengo wakakwirira.Izvi zvinowanzobudirira kana mutengi achitsvaga akawana nguva yakakodzera. Aya maitiro maviri anofanira kushandiswa zvakakodzeraapo inogutsa vatengi kuti vawane hanya yavo..
Kana uchitenga-kutengesa, mirayiridzo inotevera inofanira kuteverwa:
Ipa zvinhu zvako zvekutengesa zviripamusoro
Ipa hurukuro yako yakanyanya kuongororwa
Ipai zvinhu zvinowanzoenderana nekutengeswa kwemutengi wako.
Kutenga-kutengesa uye Kudenga-kutengesa Transactional Emails
Kutengesa-kutengesa uye kutengeswa kwepamusoro kunokosha kana kuiswa mukatitransactional emails asi nei uchifanira kuzviita usingashandisi mari shoma? Chimwe chidzidzo chinoratidzira kuti chimwe chezvinyorwa zvishanu zvekutengesakunyora zvipo zvinokurudzira.
Pamusoro pokutenga kunotenga, vatengi vanogara vachida kugamuchirachinosimbisa chiziviso chiri chikwata chikuru chekutengesa-kutengesa-kutengesa. Izvi zvinowedzera zvinyorwa kuburikidza izvo, zvakare,inowedzera mari yekambani. Machenda achagara achishanyira webhusaiti yako kana ane kubatanidzwa kukuru.
Kurongeka uye kutumirwa kwekutumirwa kwakakodzera kushanda pa-kutengeswauye kutengesa-kutengesa kuburikidza nekupa mifananidzo yakakosha uye michina yakafanana kana mazano. Uyewo, kupa mitsva mizhinji yeboka rako idzvazvigadzirwa kana mabasa anogona kuwedzera mikana yekusimudza mari yekambani.
"Ndinokutendai" maimeri ndeimwe nzira yekubata nayo mukana wokuisakutengesa-kutengesa uye kutengesa-kutengesa zvido zvinowanzosakosha.
Ngoro yekutengera Kuvharwa Emails
Dzimwe nguva, vatengi vanogona kushanyira webhusaiti yako uye edza kutenga zvigadzirwa asikurega zvimwe zvikonzero. Uyu mukana mukuru wekutumira motokari yekusiya mabhizimisi emaimeri kukurudzira nekunyengedza mutengipedza kugula. Iwe unogona kukurudzira mutengi kuti ashandise zvinotengeswa-kutengesa uye kutengesa-kutengesa.
Maitiro Akanakisisa-Kutengesa Kudenga uye Kutengesa Kudenga
Sarudza nguva yakakodzera yekutumira zvikwata
Usatumira zvakawanda zvinopa
Ita zvinopfuura kungotengesa
Wedzera zvishandiso zvakagadzirwa nemudzidzi kuti uwedzere kutendeseka kwekambani yako
Tora mukana wekutarisa kwevatengi
Chimbofunga mutengo wezvinhu zvinotengeswa - zvinopiwa zvinofanira kuva nemutengo wakawandazvakafanana neyechigadzirwa chakatengwa nemutengi
Shandisa muedzo weA / B
Kutengesa-kutengesa uye kukwidziridzwa inzira dzakasimba dzekuwedzeranhamba yekutengesa uye kukuunza mamwe mari. Kushandiswa kweivo kunoda ruzivo rwakawedzerwa rwekutsvaga emailuye zvakagadzirwa kubudirira. Kana ukaitwa nguva dzose nenzira yakakodzera, nzira mbiri idzi dzinoita tsika huru yekutengesera mukambani yako.